SAWIRO:Xaguu Ku Dambeeyay Ciyaryahankii Reer Senigal El Hadji Diouf -
[ September 23, 2018 ] Maxkamadda Milatariga Oo Xukun Ku Riday Lix nin Eedeysanayaal ah	Wararka
[ September 23, 2018 ] FIIRSO:Madaxweynihi Hore Somaliya Shiikh Shariif Oo Cambaareeyay Marxuumkii La Dilay Kadibna La Gubay	Wararka
[ September 23, 2018 ] AKHRISO: Madaxweyne Xaaf Oo Ka Horyimid Baaqii Madaxweyne Farmaajo	Wararka
[ September 23, 2018 ] Dilal Ka Dhacay Magaalada Muqdisho	Wararka
[ September 23, 2018 ] Yuusuf Xaaji”Ciidammada Kenya Hadii Aysan Sugeyn Ammaanka Shacabka Na Siiya Hubka aan Iska Difaacnee Alshabaab “	Wararka
HomeciyaarahaSAWIRO:Xaguu Ku Dambeeyay Ciyaryahankii Reer Senigal El Hadji Diouf
SAWIRO:Xaguu Ku Dambeeyay Ciyaryahankii Reer Senigal El Hadji Diouf
June 26, 2017 F.G ciyaaraha, Wararka 0
‘Guuldarrada kuma fiicni’
“Libaax ayaan ahay, guuldarrada waan ku xumahay taasina khalad ma aha,” ayuu yiri Diouf oo ka hadlaya qalqaalinimadiisii ciyaaraha.
“Sumcad ayaan leeyahay waxaana doonayaa in ay dadku i ixtiraamaan.
Wuxuu yiri “way sahlantahay in la i bartilmaameedsado. Way sahlan tahay in la iga hadlo El Hadji Diouf ana waan u ogolaaday laakiin qalbigayga ayaan ogahay oo qof fiican ayaan ahay. Qoyskayga ayaa i yaqaanna, bulshadayda ayaa i taqaanna, qaaradayda ayaa i taqaanna in aan qof fiican ahay taas ayaana ah arrinta ugu wanaagsan. Intaas wixii ka soo harana dhibaatadayda ma aha.
Waxaan waydiinay tusaale ahaan sababta uu candhuuf ugu tufi jiray ciyaartoydii ay is hayeen: wuxuuna ku jawaabay “Waxaa laga yaabaa in ay i dhaheen waxyaabo aanan rabin in aan maqlo. Arrintas waan sameeyay, waa la igu ciqaabay haddana way dhammaatay.”
“Wax dhib ah anigu uma qabo,” ayuu yiri Diouf oo intaasi sii raaciyay “Gerrard waa nin sumcad leh, anigana sidoo kale”
” Stevie Gerrard waa ciyaaryahan wanaagsan. Taageerayaasha Liverpool aad ayay u jecel yihiin, balse ma jiro wax uu u qabtay dalkiisa. Aniga waxaan ahay ‘Mr El Hadji Diouf, Mr Senegal balse isagu waa Mr Liverpool, waxaadse ogsoontahay in Senegal ay ka weyntahay Liverpool. Wuxuu u baahan yahay inuu intaa ogaado.
” Nolosheydu waa ciyaaraha balse dowladdu iyada kaligeed wax kasta ma qaban karto. Waxay kaalmo uga baahan tahay dadka aniga oo kale ah,” ayuu yiri Diouf.
“Madaxweynaha wuu i aaminsan yahay, waana sababta markii aan ka fariistay ciaayaraha uu iigu yeeray, maxaa yeelay wuxuu ogsoon yahay in dhallinyardu ay i aaminsan yihiin oo aan tusaale ay ku daydaan u ahay.”
“Faransiiska ayaa na gumaystay. Ganacsiyada dalkanagana intooda badan waxaa maamula dad Faransiis ah “marka hal ku dhaggu wuxuu aha ka badiya ama garaaca, arrin wayn ayayna noo ahayd.
“Khariidadda caalamka ayaan ku qornay Senegal”. Ayuu yiri. “Ciyaaraha Adduunka ka hor cidina ma aqoonin Senegal, Ciyaarihii Adduunka ka dibse qof kaste wuxuu rabay in uu ogaado meesha ay dunida kaga taallo Senegal.
“Wixii uu Maradona u qabtay dalkiisa ayaan u qabtay Senegal” waxaan ka mid ahaa raggii ugu miisaan cuslaa Koobkii Adduunka ee 2002dii.